Magazini - Wikipedia
Magazini (ku Chingezi: magazine) kana imhando re nwadhi (bhuku) rinoverengwa ne vanhu. Mamagazini haana kufanana nemanwadhi enguva dzose, nekuti yekuti vhezheni itsva yemagazini inodhindwa kakawanda gore rega rega. Magazini imhando ye rupoterera .
Magazini rezve munyori wekuNaijeriya, anonzi Chimamanda Ngozi Adichie
Dzinodaidzwa kunzi maupoterera (periodicals) nekuti shanduro dzinoburitswa pa rudido yakagadziswa (fixed frequency). Magazini anodhindwa pabepa. Vanhu kazhinji vanofanira nokunyora magwaro kwavari. Muenzaniso magazini iri Time. Kune magazini pamusoro pezvinhu zvakawanda.
Magazini akafanana nemapepanhau, asi kazhinji nguva iri pakati peshanduro nyowani yakareba. Imwe neimwe inoda mari yakawanda, uye mazhinji ane mavara pane peji rega rega. Zvakare, dzimwe nguva magazini anouya nezvipo zvidiki kupa mubairo kune vaverengi vanozvitenga.
Shoko rekuti "magazini" rinobva kuChifurenji chePakati magasin zvichireva "imba yekuchengetera, depo (depot), chitoro", kubva kuItari magazzino, kubva kuChiarabhu makhazin , huwandu hwe makhzan zvinoreva "imba yekuchengetera". Mupfungwa yayo yepakutanga, izwi rekuti "magazini" raireva nzvimbo yekuchengetera kana dhivhaisi (device). Kana zvakanyorwa nwadhi, rinoreva dzakaunganidzwa akanyorwa nyaya.
Mamagazini e muZimbabwe
↑ 1.0 1.1 "magazine | Origin and meaning of magazine by Online Etymology Dictionary". www.etymonline.com. Archived from the original on 13 August 2019. Retrieved 2 October 2019.
Retrieved from "https://sn.wikipedia.org/w/index.php?title=Magazini&oldid=89180"
Last edited on 26 Nyamavhuvhu 2021, at 11:07
This page was last edited on 26 Nyamavhuvhu 2021, at 11:07.